Vimba uMEC wezeMpilo ekubekeni iziguli engozini - Amandla.mobi isiZulu
Vimba uMEC wezeMpilo ekubekeni iziguli engozini
550 signatures required
Ezisematheni: kufakwe isicelo esiphuthumayo enkantolo esivimba uMnyango wezeMpilo eGauteng ekuqhubekeni nokuxosha iziguli zengqondo. U-MEC wophule isithembiso sakhe, futhi kumanje zingama-54 iziguli zengqondo zishintshelwe endaweni egcina izingane .
Lesi iskhathi esibucayi sokwengeza ingcindezi kuMEC wezeMpilo. Ungawuxhasa lo mkhankaso ofuna ukuthi uMEC Mahlangu abeke uhlelo oluqinisekisa ukwelashwa kweziguli kanye nokuphepha kwazo?
Iziguli ezifana noSiSizwe, zithola ukunakekelwa amahora angu-24 eLife Esidimeni isikhathi esidlule iminyaka engu-13. Umndeni wakhe ukhathazekile ngokuthi isimo sakhe sempilo sizobabucayi uma ezodedelwa ngaphandle kwesiqiniseko sokuqhubeka nokunakekelwa kwakhe njengoba bekwenzeka Esidimeni. UmauMEC Mahlangu ewakhathalela futhi ewahlonipha amalungelo kanye nesithunzi seziguli zengqondo, ubezokuvimba lokudedelwa kweziguli ngempoqo aphinde abeke uhlelo oluzaqunisekisa ukunakekelwa okuqhubekayo kweziguli.
Kube yingcindezi evela emindenini kanye nomphakathi okuphoqe uMEC woMnyango wezeMpilo eGauteng, uQedani mahlangu, ukuthi athembise ukuhlehlisa kokuvalwa kweLife Esidimeni ngoJune 2016. Kodwa kuthe uma bazindaba bedlulela kwezinye izindaba, uMEC kanye noMnyango wakhe bakhipha ngempoqo iziguli, bezifaka engozini. Ungayifaka ingcindezi kuMEC Mahlangu ukuthi avimbe ukufakwa engozini impilo yeziguli. Sicela uxhase lo mkhankaso.
Mhlonishwa Qedani Mahlangu, MEC wezeMpilo, Gauteng
Thina, abasayinde lapha, siyabonga ngokuzwa izikhalo zeziguli kanye nemindeni yazo ngokwelula inkontileka kanye neLife Esidimeni, okuholela ukuthi kungabi khona siguli esikhishwayo. Kusobala ukuthi uMnyango wakho wahluleka ukuxoxisana neziguli kanye nemindeni yazo, futhi usolwa ngokukhipha ngenkani iziguli zengqondo ezingalapheki. Sifuna uphenyo oluzimele ngezinsolo zokuthi kuneziguli ezikhishwe ngempoqo. Okwamanje, sifuna ufeze isibopho sakho sokuvikela amalungelo, isithunzi kanye nempilo yeziguli ngokuthi uxoxisane ngendlela nemindeni yeziguli, amalunga emindeni kanye nongoti; okuzothi kusukela lapho, kubekwe uhlelo olucacile nolugculisa amalunga omphakathi oluzoqikelela ukunakekelwa kanye nokuphepha kwezuguli.
Siseka imindeni yeziguli, labo izithandwa zabo zibhekene nokungatholi ukwelashwa kanye nokunakekelwa ngenxa yokukhishwa ngempoqo bekhishelwa ezindaweni abangazijwayele, noma bekhishelwa emindenini yabo engenawo amandla okubanakekela, noma ubuchwepheshe bokubhekana nesimo sabo sokugula ngenqondo.
 Gauteng health department accused of shirking mental healthcare rights, Greg Nicolson for the Daily Maverick 14 March 2016.
Ungawungenela lo mkhankaso?
Njengamanje uMEC Mahlangu ungaphansi kwengcindezi enkulu esuka kwiziguli kanye nemindeni yazo. ngokubambisana singakwazi ukuqikelela ukuthi akukho ziguli ezixoshwa ezibhedlela ngaphandle kohlelo oluqiniseka ukunakekelwa kweziguli okuqhubekayo.
Khetha Province yakho Eastern CapeFree StateGautengKwaZulu-NatalLimpopoMpumalangaNorth WestNorthern CapeWestern CapeOutside South Africa
Yebo. Ngazise ngokuqhubekayo kulo mkhankaso kanye neminye ngemeyili